XOG: Beesha Habargidir oo ka shaqeyneysa sidii loo heshiisiin lahaa MD Farmaajo & C/raxmaan Cabdishakuur | Allbanaadir
XOG: Beesha Habargidir oo ka shaqeyneysa sidii loo heshiisiin lahaa MD Farmaajo & C/raxmaan Cabdishakuur
Siyaasiyiin iyo Odayaal dhaqameed ka soo jeedo Beesha Habargidir ayaa ka shaqeynaya sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen madaxtooyada Soomaaliya iyo Siyaasiga mucaaradka ah ee C/raxmaan C/shakuur Warsame oo xiriir aan wanaagsaneyn ka dhaxeeyo.
C/raxmaan C/shakuur oo ah siyaasi codkar ah hadana si aad ah u dhaliila Dowladda ayaa loo arkaa in soo dhowaanshihiisa Villa Soomaaliya wax badan ka tareyso Dowladdnimada Soomaaliya.
Siyaasiyiinta Beesha habar ee wada qorshahan oo isugu jira kuwo horay xil u soo qabtay iyo kuwo hadda haya ayaa wada dadaalo xooggan oo ay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/llaahi Farmaajo iyo Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre kaga dhaadhicinayaan sidii loola kullansiin lahaa C/raxmaan C/shakuur loona xaliyo khilaafka jira si xal waara loo gaaro.
Ujeedka arritaan laga leeyahay ayaa lagu sheegay iney tahay in sare loo qaado hanaanka Dowladnimo iyo dib u heshisiinta Soomaaliya.
Kullamo siyaasadeed qorshahan looga arrinsanayo ayaa ka socda qaar ka mid ah Hotelada ugu waa weyn magaalada Muqdisho.
Siyaasi C/raxmaan C/shakuur oo hadda ku maqan dalka dibadiisa ayaa marka uu dalka ku soo laabto la doonayaa in loo bandhigo qorshahan lagana dhaadhiciyo inuu madaxtooyada galo markii ugu horeysay tan iyo doorashadii Farmaajo iyo magacaabista Xasan Cali Kheyre.